घिउ कति स्वस्थकर ? यस्तो भन्छ विज्ञान – Khabar Silo
एजेन्सी । भारत, नेपाल लगायत मध्य पूर्वका विभिन्न परिकारहरुमा घिउको अधिक प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । अझ नेपालीहरुले त यसलाई स्वाद लिएर सिधै सेवन गर्ने गरेका छन् । परम्परागत रुपमा घिउ दूधबाट बन्ने नौनीलाई उमालेर निस्कासन गरिन्छ ।
बटर र घिउलाई केही हदसमम उस्तै मानिएपनि बटर धेरै तापमानमा तताइएको हुन्छ भने घिउलाई एकदमै कम आँचमा तताइन्छ र यसलाई तयार पार्न तुलनात्मक रुपमा धेरै समय लाग्दछ । यसरी कम तापमानमा तताइने हुनाले नै घिउमा भिटमिन र पोषक तत्वहरु संरक्षित हुन्छन् । घिउलाई विशेषगरी भिटमिन–इ, भिटमिन–ए, एन्टिअक्सिडेन्ट लगायत अन्य जरुरी तत्वहरुको राम्रो श्रोत मानिन्छ । यिनै तत्वहरु धेरै उच्च तापमानमा तताउँदा नष्ट भएर जाने गरेका छन् ।
यसरी आयुर्वेदमा पनि घिउलाई ६ हजार वर्ष पुरानो औषधिका रुपमा लिइने गरिएको छ जुन भारत लगायत विभिन्न देशमा प्रयोग हुने गर्दछ । लामो समयदेखि नै घिउ हर्बल औषधिका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको चन्द्रधर त्रिवेदी बताउँछन् जो साउथ डकोटा स्टेट युनिभर्सिटीका विशिष्ट प्रोफेसर हुन् । पहिले घिउलाई पवित्र कुरा मानिने भएकाले पनि यसलाई औषधि रुपमा अपनाउन सुरु गरिएको र हिन्दु समुदायमा यसले चिकित्सकीय साथै अध्यात्मिक लाभ दिने पनि विश्वास रहेको उनले बताए ।
त्रिवेदीका अन्ुसार आधुनिक विज्ञानमा पनि फ्याटयुक्त खानेकुरा सेवन गर्नुले ‘बयो–अभाइभेलिटि’ बढाउँछ र स्वस्थ भिटमिन र मिनल्सलाई सोस्न मद्दत गर्छ भन्ने मानिसकेको छ । यस्तोमा कुनैपनि सागसब्जी लगायत स्वस्थकर खानेकुरा घिउमा पकाएर खाँदा शरीरमा अधिक मात्रामा पोषक तत्व पुग्ने उनको भनाइ छ । यसरी घिउ स्वादिष्ट हुने हुँदा यसले खानालाई केही हदसम्म स्वस्थ बनाइदिने र नरुचेको अवस्थामा मीठो बनाइदिन सक्छ ।
तर के घिउ आफैँमा स्वस्थ खानेकुरा हो ? वास्तवमा घिउका जति फाइदा भएपनि अन्त्यमा यो एक किसिमको फ्याट नै हो । त्यसैले यसमा पनि भारी मात्रामा क्यालोरी हुन्छ जसले तौल बढाउने र मोटोपनाको गराउन सक्छ । यसका साथै घिउ लगायत विभिन्न थरीका बटरहरु जसमा उच्च स्याचुरेटेड फ्याट हुन्छन्, ती सबैलाई मुटु सम्बन्धी रोगसँग जोडेर हेरिन्छ ।
तरपनि पछिल्ला केही अध्ययनहरुले घिउ लगायत फ्याटयुक्त खानेकुराबारे दृष्टिकोणमा बिस्तारै परिवर्तन ल्याइरहेका छन् । २०१६ मा यस सम्बन्धी गरिएको एक समीक्षा अनुसार थोरै घिउको सेवन र मुटु सम्बन्धी रोग वा मधुमेहबीच तुलनात्मक रुपमा एकदमै थोरै वा कुनैपनि सम्बन्ध छैन । यसअघि घिउको सेवनले मुटुमा गम्भीर असर गर्ने र दिर्गकालीन रोगको खतरा बढाउने सम्बन्धी चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । त्यसैले यही विषयमा स्पष्ट जानकारी हासिल गर्न थुप्रै अध्ययनहरु सञ्चालन गरिएको हो । जसमा हाम्रो डायटमा केबल १० प्रतिशत अर्थात ठीक्क मात्रामा घिउ समावेश गरिँदा त्यसले केलोस्ट्रोलको स्तरमा कुनै हानि नपुग्ने वा मुटु सम्बन्धी कुनै खतरा नगराउने पाइएको हो ।
तर धेरै मात्रामा घिउ भएको डायट सेवन गर्दा भने रगतमा अस्वस्थ स्तरले कोलेस्ट्रोल बढ्ने गरेको र विभिन्न रोग समेत निम्त्याउन सक्ने बताइएको छ। तापनि घिउ अन्य प्रकारको बटर भन्दा स्वस्थकर हुन्छ भन्नेमा ठोस प्रमाण फेला पार्न सकिएको छैन । यस्तोमा हामीेले दैनिक खानामा प्रयोग गर्ने तेल वा अन्य फ्याटलाई घिउले प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेछ भन्नु गलत हुने बताइएको छ । टाइम
Posted on February 28, 2021 February 28, 2021 Author khabar silo
लसुनलाई आफ्नो पकेटमा राख्नाले हुन्छ यस्ताे चमत्कारी फाइदै-फाईदा । हर कोहीको चाहना हुन्छ आफ्नो भाग्यले सबै काममा साथ देओस्। सधै सबै कुरा राम्रो होओस्। तर कुनै समय सोचे जस्तो हुँदैन्। जसको भाग्य सधै उसको साथ हुने गर्दछन्, त्यो मानिसले सधै निकै मेहनत गर्दछ। तर मेहनतपछि पनि तपाईको भाग्यले तपाईलाई साथ दिएको छैन् भने आज हामी […]
बिहान उठ्नेबित्तिकै एक वा दुई गिलास सादा पानी पिउनुहोस्। अनुसन्धानले नै प्रमाणित गरेको छ कि बिहानै पानी पिउनाले शरीरबाट विषाक्त पदार्थ हटाउन मद्दत गर्छ। पानीमा कुनै क्यालोरी पनि हुँदैन भने यसले भोक मेटाउन र अनावश्यक क्यालोरी खानबाट पनि बचाउँछ। छरितो र पातलो शरीर मन नपर्ने मानिस कमै हुन्छन्। यस्तो शरीर देख्दा सुन्दर त हुन्छ नै, […]
मानव स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्न सन्तुलित आहार जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि मानिसले सबै खानेकुरा मिलाएर खानुपर्छ ।अण्डामा मानव शरीरका लागि चाहिने अधिकांश तत्व पाइने भएकाले यसलाई प्रोटिनको पूर्ण स्रोत मानिन्छ । अण्डामा क्याल्सियम, आइरन, प्रोटिन, भिटामिन ए, फस्फोरस, भिटामिन डी, ई तथा जिङ्क लगायतका तत्वहरु हुने गर्दछ । यसले बालबालिका तथा गर्भवती महिलालाई निकै लाभ […]